शुक्रबार साप्ताहिकको कभर स्टोरी गोप्य अंग ताक्दै ट्याटु – Todays Nepal
लक्ष्मी आचार्यस्वअभिव्यक्तिको सुन्दर माध्यमका रुपमा लिइने ट्याटुको क्रेज नेपालमा दिन–प्रतिदिन फैलँदैछ । आफ्नै शरीरलाई कलाको क्यानभास बनाइने ट्याटु–क्रेज आश्चर्य गरी बढ्दै छ । देखिने अंगमा मात्र होइन, शरीरको गोप्य भागमा ट्याटु अंकण गर्ने प्रचलन नेपालमा उत्तिकै छ । विशेषगरी युवतीहरुले गोप्य भागमा विभिन्न डिजाइनका ट्याटु खोपिरहेका छन् । किन खोपिदैछ नदेख्ने ठाउँमा ट्याटु ? शरीरका संवेदनशील तथा गोप्य अंगमा खोपिने ट्याटु ट्रेन्डमाथि अनिल यादवले तयार पारेको सामग्री ।
गोप्य ठाउँमा किन ? मान्छेले ‘ट्याटु’ किन खोप्छ ? धेरैलाई लाग्दो हो– ‘सो अप’ अर्थात् देखाउनका लागि । देखाउनकै लागि हो भने मान्छेले झट्ट हेर्दा नदेखिने ठाउँमा किन खोप्छ त ? अर्थात्, किन गोप्य अंग नै रोज्छ ? मनोविद् करुणा कुँवर भन्छिन्, ‘शरीरको देखिने÷नदेखिने जस्तो ठाउँमा ट्याटु खोप्नेको पनि मनोभावना त आफ्नो पहिचानलाई चित्रित गर्ने नै हुन्छ । कतिपयले सबैले देख्नेगरी चित्रित गर्छन्, कसैले सबैलाई देखाउन चाहँदैनन् । कतिपयले खुल्ला पहिरन लगाउँदा मात्र देखिने गरी ट्याटुु खोपेर आफ्नो यौनिकतालाई चित्रित गर्न खोजिरहेको पनि हुनसक्छ ।’ उनलाई यस्तो पनि लाग्छ– गोप्य ठाउँमा ट्याटु खापाउने महिलाहरुले आफूलाई ‘सेक्सी’ र ‘सुन्दरी’ छु भनेर आत्मविश्वास प्रमाणित गर्न खोजिरहेका पनि हुन्छन् ।
काठमाडौं, सामाखुसीकी रेणु पौडेल (नाम परिवर्तन)ले आफ्नो स्तनमा ‘लभ’ लेखिएको ट्याटु खोपाएकी छन् । ‘खोप्न त हातमा मन थियो तर घरमा ट्याटु खोपेको मन पराउँदैनन्, त्यसैले यहाँ (स्तन) खोपेकी हुँ,’ उनले बताइन् । करिब १४ वर्षदेखि ट्याटु खोप्न थालेका काठमाडौं, ठमेलका स्वस्तिक ट्याटुका ट्याटुकार सञ्जय खड्गी घरबाट अनुमति नमिल्ने भएकाले धेरै युवतीले नदेख्ने ठाउँमा खोपाउने गरेको बताए । ‘त्यसरी ट्याटु खोपाउनेहरुको चाहना कमसेकम साथीहरु माझमा पुग्दा देखाउन पाइयोस् भन्ने हुन्छ, कोही आफ्नो स्पेसल मान्छेले मात्र देखोस् भन्ने चाहना राखेर पनि खोप्छन् होला,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । ट्याटु त आकर्षक देखाउनका लागि खोपिनुपर्ने हो तर युवतीहरुले किन छोपिने गरी हान्छन् ? धरानका व्यस्त ट्याटु आर्टिस्ट विमल राई भन्छन्, ‘डरले वा संकोचले पनि हुनसक्छ वा जसलाई देखाउनुपर्ने हो उसैलाई मात्र देखाउनको लागि पनि हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार पूर्वतिर युवतीहरुले तिघ्रा, पाखुरा, पिँडुला, स्तनदेखि योनि छेउछाउका भागतिर ट्याटु खोप्ने गरेका छन् । ‘केही लेडिजहरु अरुको देखासिकीमा भल्गर देखिने गरी टाटु खोप्न पनि आउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तालाई सम्झाएर पठाउने गर्छु ।’
कस्तो डिजाइन बढी ? शरीरका गोप्य ठाउँमा बढी कस्ता डिजाइनमा ट्याटु खोपाउँछन् ? ‘छातितिर आफ्ना छोराछोरी, इष्ट देवदेवीको नाम र अनौठा भनाइहरु खोपाउनेहरू पनि छन्,’ स्वस्तिक ट्याटुका खड्गीले भने, ‘कतिपयले प्रेमी र प्रेमिकाको नाम खोपाउँछन् भने त्यसबाहेक राष्ट्रिय झण्डा, फूल, अजिङ्गर, कङ्काल आदिको ट्याटु बढी खोपाउँछन् ।’
पोखराका व्यस्त ट्याटुकार विक्रमकुमार जुर्वाचनका अनुसार त्यहाँ धेरैजसो नदेखिने ठाउँतिर पुतली, ड्र्यागन, माछा लगायतका चित्र खोपाउँछन् । यता ठमेलस्थित मोहन्स ट्याटुका ट्याटुकार श्री किसीको भने ‘ठोस डिजाइन’ नहुने बताउँछन् । ‘ठ्याक्कै यस्तै हान्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अधिकांशले आफैँ कन्सेप्ट र डिजाइन लिएर आउने गर्छन् । उनीहरुकै कन्सेप्टअनुसार हामीले काम गर्ने गर्छौं ।’
ट्याटुको बाजी नेपालमा ट्याटु खोपाउनेहरु नेपाली मात्र छैनन्, विदेशी पनि उत्तिकै छन् । ‘कतिपय विदेशीले नेपालमा धेरै सस्तो पर्ने भएकाले यहाँ खोपाएर जान्छन् भने कतिपयले नेपालको सम्झना बोकेर लाने उद्देश्यले खोपाउँछन्,’ स्वस्तिक ट्याटुका सञ्जय खड्गीले बताए । उनले डिजाइन र घण्टाअनुसार मूल्य लिने गरेको बताए । ‘ट्याटुको डिजाइन हेरेर घण्टाको २५ सयदेखि तीन हजारसम्म लिन्छौं,’ उनले भने ।
अफेयरमा खोपाउने, ब्रेकअपपछि छोप्ने पछिल्लो समय आफ्नो शरीरको अंगमा प्रेमी र प्रेमिकाको नाम खोपेर दङ्ग पर्ने युवा÷युवतीको जमात ठूलो छ । प्रेममा रहेका बेला त्यसरी नाम खोपाउनेहरुले पछि ब्रेकअप भएपछि पुनः ‘कभरअप’ गर्ने गरी नयाँ ट्याटु बनाउने गर्छन् । शुक्रबारकर्मीले भेटेका अधिकांश ट्याटुकारले युवायुवतीमा यो समस्या रहेको बताए । ‘त्यसैले म अन्डर एट्टिनका केटाकेटीलाई ट्याटु नहानोस् भन्ने चाहन्छु,’ मोहन्स ट्याटुका श्री किसीले भने, ‘उनीहरुमा युवा जोश हुन्छ, दिमाग पनि परिपक्व भइसकेको हुँदैन । त्यसैले गहिरो लभमा परेको बेला ‘नाम हान्दिउँ न त’ भनेर हान्दिन्छन् अनि पछि पछुताउँछन् । अचम्म त के छ भने मकहाँ आउने अधिकांश युवायुवती त अफेयरमा नाम खोपाउने भन्दा पनि ब्रेकअप भएपछि छोपाउनेहरु पर्छन् ।’
प्रेमीकै अगाडि ट्याटु गोप्य भागमा ट्याटु खोपाउँदा थुप्रै युवतीहरुले आफ्नो प्रेमीलाई पनि सँगै लाने गर्छन् । स्तनमा फूलको ट्याटु खोपाएकी ठमेलको एक डान्स बारमा कार्यरत सम्झना लिम्बु (नाम परिवर्तन)ले आफूले ब्वाइफ्रेन्डकै अगाडि ट्याटुु खोपेको बताइन् । ‘ब्वाइफ्रेन्ड साथमा हुँदा सेफ फिल हुन्छ र ब्वाइफ्रेन्डले पनि नराम्रो सोच्दैन भनेर लगेकी थिएँ,’ उनले सुनाइन् ।
घरमै जान्छन् ट्याटुकार काठमाडौं, लाजिम्पाटको एक डान्सबारमा कार्यरत नुवाकोटकी डान्सर वर्षा लामाले पाँच महिनाअघि ढाडको माथिल्लो र मुनि दुवै भागमा ट्याटुु खोपाएकी छन् । ‘सुरुमा ट्याटु भन्नेबित्तिकै हेट लाग्थ्यो, पछि मसँगै काम गर्ने एकजना दिदीको ट्याटु देखेर मलाई पनि खोप्न मन लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘एकजना चिनेको दिदीको छोरालाई कोठामै बोलाएर खोप्न लगाएँ । दुइटा हान्दा पाँच हजारतिर खर्च भयो होला ।’ उनले आफूले ट्याटु अरुका लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि हानेको बताइन् । ‘नढाँटी भन्नुपर्दा सेक्सी देखिनलाई ट्याटु हानेकी हुँ, कहिलेकाहीँ छोटो लुगा लगाउँदा मेरो ट्याटु देखिन्छ त्यतिबेला मान्छेहरु मलाई घुरेर हेर्छन्,’ उनले सुनाइन् । फूलको बीचमा लभ लेखिएको ट्याटु खोपाएकी उनलाई अब कम्मरमा खोपाउने रहर रहेछ ।
गोप्यमा गाह्रो शरीरका गोप्य भागतिर ट्याटु खोपाउँदा सबैभन्दा बढी दुख्ने गरेको ट्याटुकारहरु बताउँछन् । ‘प्रायः सबै गोप्य ठाउँतिर बढी दुख्ने गर्छ किनभने त्यहाँको छाला कमजोर हुन्छ । खासगरी छाती र स्तनमा धेरै दुख्ने गर्छ,’ आठ वर्षदेखि ट्याटु कलामा कार्यरत मोहन्स ट्याटुका श्री किसीले बताए ।
गोप्य भाग्यमा खोप्दाको अनुभव शरीरका गोप्य र संवेदनशीलमा भागमा ट्याटु खोप्दा ट्याटुकारहरुलाई कस्तो अनुभूति हुँदा हो ? ‘सुरुसुरुमा नेचुरल फिलिङ आउँथ्यो,’ पोखराका ट्याटुकार विक्रमकुमारले भने, ‘तर काम गर्न थालेपछि ध्यान काममै मात्र हुन्छ । नेगेटिभ्ली सोचिँदैन । फेरि कसैको इच्छाविपरीत जाने कुरा पनि हुँदैन ।’ काठमाडौं, वसन्तपुरका केटिएम इन ट्याटुका ट्याटुकार निरज शाहीको विचार पनि विक्रमसँग मिल्दोजुल्दो नै थियो । ‘सुरुसुरुमा नर्भस भइन्छ,’ उनले भने, ‘तर मेसिन चल्न थालेपछि पूरै काममा फोकस भइन्छ । अरु केही मतलब हुन्न ।’
गोप्य पियर्सिङ गोप्य खोपाउने मात्रै होइन गोप्य छेड्ने चलन पनि बढ्दो छ । ट्याटु हाउसहरुमा ट्याटुसँगै पियर्सिङ (औँठी छेड्ने) सुविधा पनि राखिएको हुन्छ । मोहन्स ट्याटुका पियरसियर अर्थात् म्यानेजर ओमप्रकाश गुरुङका अनुसार अचेल शरीरका जुनसुकै अंगमा ट्याटु हान्नु र पियर्सिङ गर्नु सामान्यजस्तै भइसक्यो । ‘अचेल अप्ठेरो मान्ने भन्ने नै हुन्न, फेरि पर्सनल ट्याटु र पियर्सिङका विषयमा कुरा गर्नै नचाहने धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘युवतीहरुले गोप्य भागको कुरा गर्नुपर्दा निप्पल, नाइटो र यौनाङ्ग (क्लिट)मा छेड्ने गर्छन् । सायद पियर्सिङले उनीहरुलाई आनन्दित तुल्याउँदो हो ।’ पछिल्लो समय लिंगमा ‘सिलिकन बिट्स’ लगाएर यौनिक आनन्द लिने पुरुष पनि बढेको गुरुङको भनाइ थियो ।
‘यौनिकता झल्काउन गोप्य ट्याटु’ करुणा कुँवर मनोविद्
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः नेपाल–भारत वन डे सिरिजका लागि सुनौलो मौका